बिहान सबेरै उठेर स्त्रीले यी काम गर्दा भाग्य चम्किन्छ ! - दैनिक नेपाल न्युज
साेमबार, असार २९, २०७७ | Monday 13th July 2020
प्रकाशित द्वारा: बिहीबार, माघ १६, २०७६
स्नान आदी कर्म पश्चात सफा वस्त्र लगाएर घरको मन्दिरमा पूजा गर्नुपर्दछ। पूजामा तामाको भाँडोमा पानी भरेर राख्नु पर्दछ। पूजापछि उक्त भाँडोमा राखेको जल अशोकको पातले घरको मुख्य द्वारमा तथा पुरै घरमा छिट्नु पर्दछ। त्यसपछि तुलसीमा एक भाँडो जल चढाउनु पर्दछ। यस गर्दा सुख, सन्तुष्टि र बैभव मिल्ने विश्वास गरिन्छ । अन्लाईन टिभी नेपालबाट
आलुको बोक्रा ताछेर खेर नफाल्नुहोस, यस्ता छन् फाइदै फाइदा !
ज्योतिषहरुका अनुसार सयौँ वर्षपछि श्रावणमा अद्भुत संयोग बनेको छ । श्रावण महिनामा ५ सय ५८ वर्षपछि ४ वटा ग्रहको वक्र योग परेको छ । श्रावण महिनामा योपटक गुरु, शनि, राहु [...]
मेषः– समय सुधारोन्मुख देखिन्छ । काम गर्दा इज्जत प्रतिष्ठाको ख्याल राखेर गर्नु होला । आफ्ना काम भन्दा अरुका काम बढि हुनेछन् तर काम गरेर जश कम मिल्नेछ । लाभदायक यात्राको [...]
असार ७ गते आइतबार खण्डग्रास सूर्यग्रहण, यि ८ राशि भएका मानिसले सूर्यग्रहण नहेर्नुस…
साम्राज्ञीको आरोप: आफूमाथि छोरी भनिभनि भुवनले यौन दुर्व्यवहार गरेकै हो (भिडियो हेर्नुहोस)
वैज्ञानिकले दिए चेतावनी: यस्ता मानिसहरुमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनले समेत काम नगर्ने